Hafari Malagasy Hivarotra trano mora
Fanamby goavana no apetraky ny fikambanana Hafari Malagasy amin'ny taona 2018 ho avy io.
Ankoatra ny fanomezana asa ny mpiray tanindrazana amin'ny alalan'ireo tetikasany maro dia hiroso amin'ny fivarotana trano mora ho an'ireo maniry te hanan-trano indray ny fikambanana, araka ny fanazavan'ny filoha nasionaliny Rafanomezantsoa Jean Nirina. Tafiditra ao koa ny any amin'ny faritra, ankoatra ny tolotanana ho an'ny mponina eto Antananarivo. Manomboka amin'ny 1 hetsy Ariary nyvola aloa isam-bolana ary efa eo an-dalam-pikarakarana ny taratasy ny fikambanana. Fantatra izany nandritra ny lanonana famaranana ny taona notanterahin'ny fikambanana teny Anosizato ny faran'ny herinandro teo. Nosantarina tamin'ny fotoam-pivavahana nisaorana an'Andriamanitra ny hetsika sady nangatahana fitahiana ihany koa hahafahan'ny vahoaka Malagasy sy fikambanana Hafari miatrika amim-pitoniana sy amim-pilaminana ny taona vaovao 2018. Nofaranana tamin'ny fizarana sakafo ho an'ireo zokiolona an-jatony ny lanonana, ho mariky ny firaisankina sy ny fifankatiavana misy eo amin'izy ireo sy ny fikambanana.